इलेक्ट्रिक साइकल कारखाना - चीन इलेक्ट्रिक साइकल निर्माता, आपूर्तिकर्ता
patinetes electricos को लागि मोटर्स
किम्कोले यसको लागि पूर्ण शहर चार्ज गर्ने इकोसिस्टममा लगानी गरिरहेको छ ई-फेसन,र सामान्य रोयल इन्फिल्डले पनि निकट भविष्यमा इलेक्ट्रिक बाइक अनावरण गर्न लागेको बताएको छ। हामी नयाँ रोयल इन्फिल्ड मोटरसाइकल, नयाँ जीरो मोटरसाइकल र अतिरिक्त बिक्री गर्छौं। क्यालिफोर्नियामा आधारित प्रायः जीरो मोटरसाइकलहरू उच्च दक्षताका मोटरसाइकलहरूको उत्तम विक्रेता उत्पादक हो र हजार एकाइहरू बेच्न सक्ने एउटा मात्र हो। यी वातावरणीय-रमाइलो बाइकहरू मध्ये एक छनोट गर्ने फाइदाहरूको बारेमा थप अध्ययन गर्न पढ्न जारी राख्नुहोस्! कृपया स्कुटरलाई उत्तम अवस्थामा राख्न सक्षम हुन उपभोक्ता ह्यान्डबुकमा आधारित ब्यालेन्स स्कूटर कायम गर्नुहोस्। तपाईंले ब्यालेन्स भुक्तान गर्नु भन्दा पहिले प्याकेजहरू।
इलेक्ट्रिक स्कूटर स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड वयस्क फोल्डेबल स्कूटर
साधारण मर्मतसम्भार: इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रयोग गर्ने अर्को फाइदा भनेको साधारण मर्मतसम्भार हो। यसमा कुनै जटिल र भारी भागहरू छैनन्इलेक्ट्रिक स्कूटर मर्मत गर्न। त्यसैले बच्चाहरूले स्कूटरको उचित मर्मत आफैं गर्न सक्छन्।
कम्फर्ट: नरम प्याडेड सिटले राइडरलाई आराम र सहजताका साथ सिट गर्न मद्दत गर्छ। ठुलो आकारको डेकले सवारी चलाउँदा राइडरलाई खुट्टालाई आरामसँग राख्न मद्दत गर्दछ। शोर मुक्त मोटरले सवारलाई एकदमै राम्रो सवारी दिन्छ। इलेक्ट्रिक स्कुटरका पाङ्ग्रा, टायर र ब्रेकले सहज र बाउन्समुक्त सवारी अनुभव प्रदान गर्दछ।
सुरक्षित: बच्चाहरू र वयस्कहरूको लागि, यी इलेक्ट्रिक स्कूटरहरू सबैभन्दा सुरक्षित छन्। यी स्कुटरहरू पदयात्रामा चलाउन सकिने भएकाले सडक दुर्घटनाबाट बच्न सकिन्छ। अभिभावकहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई इलेक्ट्रिक स्कूटर दिनको लागि सुरक्षित महसुस गर्छन्।
रंगीन बत्तीहरू भएका स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर थोक
अगाडि र पछाडि दुईवटा एलईडी बत्तीहरू अँध्यारोबाट नडराउनुहोस्।
K11 ले ठाडो ट्यूब लाइटको डिजाइन थप्छ, पेडल लाइट र टेल लाइटहरू, जसले रातमा सवारी गर्न चिसो र थप सुन्दर बनाउँछ।
सुरक्षा महत्वपूर्ण छ। K11 ले तपाईंलाई देख्नको लागि, साथै तपाईंलाई देख्नको लागि रातको समयमा पनि सवारी गर्दा देखिने बत्तीहरू प्रदान गर्दछ।
7000w मोटर patinete electrico scoter इलेक्ट्रिक स्कूटर CE संग
के यूकेमा भाडामा लिने ई-स्कुटरहरू कानूनी छन्?
बेलायतको यातायात विभागले भाडाको प्रयोगलाई वैधानिकता दिएको छ इलेक्ट्रिक स्कुटरहरूविशिष्ट युके शहरहरूमा, प्रत्येक महिना सूचीमा थप शहरहरू थपिने क्रममा। तपाईंले यी भाडाका ई-स्कुटरहरू सडक, साइकल लेन र ट्र्याकहरूमा चलाउन सक्नुहुन्छ - यदि तपाईंसँग युकेको अस्थायी वा पूर्ण ड्राइभिङ इजाजतपत्र छ भने - तर फुटपाथहरूमा होइन। सवारी साधनहरू 15.5mph मा सीमित छन् र हेलमेट सिफारिस गरिएको छ तर अनिवार्य छैन। सरकारले बेलायतको सडकमा निजी विद्युतीय स्कुटरहरूलाई वैधानिकीकरण गर्ने वा नगर्ने बारे विचार गर्नु अघि भाडामा लिने ई-स्कुटरहरूको प्रयोग र यूके सार्वजनिक यातायात स्थानमा तिनीहरूको प्रभावको अनुगमन गर्नेछ।
2021 13 इन्च2व्हील फोल्ड गर्न मिल्ने इलेक्ट्रिक स्कूटर LCD डिस्प्लेको साथ
इलेक्ट्रिक स्कुटरहरूप्रत्येक 2-4 हप्तामा द्रुत जाँच गराउनुपर्छ र वर्षमा कम्तिमा एक पटक राम्रोसँग मर्मत गर्नुपर्छ। चेक-अप 6-11 मिनेट मात्र लाग्छ र नियमित रूपमा प्रदर्शन गर्नुपर्छ। यसमा टायरको चाप नाप्ने, लूज नट र बोल्टको जाँच गर्ने, र लूज स्टेयरिङ स्तम्भ समावेश हुन्छ। वार्षिक मर्मत कार्यमा धेरै समय लाग्छ किनभने यसले स्कूटरको आंशिक विघटन समावेश गर्न सक्छ। यो एक विशेष सेवा पसल द्वारा राम्रो प्रदर्शन गरिन्छ, तर DIY मेकानिक्स मा केहि अनुभव संग जो कोहीले पनि पूरा गर्न सकिन्छ।
नियमित चेक-अप र वार्षिक मर्मतसम्भार दुवैले सवारको सुरक्षा र समस्यामुक्त सवारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यस कारणका लागि, इलेक्ट्रिक स्कूटरको नियमित मर्मतसम्भारको मूल्यलाई कहिल्यै कम आँकलन गर्नु हुँदैन।
2021 नयाँ साइकलटा 84v/72v 10000w 100Ah इलेक्ट्रिक स्कुटर
· हाम्रो सेवा दर्शन भनेको प्रत्येक एकल ग्राहकलाई सन्तुष्ट पार्नु र दीर्घकालीन व्यापार साझेदारी निर्माण गर्नु हो
· हामीले विराम चिन्ह र ग्यारेन्टी उत्पादन गुणस्तर द्वारा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त गर्छौं
· हामी बिभिन्न अर्डर समाधानहरूको साथ न्यूनतम अर्डर मात्रा (MOQ) को विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछौं
Haibadz टोली सधैं समर्थन गर्न उपलब्ध छ OEM ग्राहकहरु तपाईंको अपेक्षाहरू र अनुकूलित उत्पादनहरूको लक्ष्यहरू पूरा गर्न।
10000W मोटर शक्तिशाली 13 इन्च फ्याट टायर सिट सहित इलेक्ट्रिक स्कूटर
समकालीन फुटपाथहरू पुरानो वर्षको पैदल यात्री फ्रीवेहरूबाट धेरै टाढा छन्। स्कुटर, बाइकहरू, स्केटबोर्डहरू, र न्यूयोर्क शहरदेखि काठमाडौंसम्मका तीनवटा डट फुटपाथहरूको इलेक्ट्रिक संस्करणहरू। र यद्यपि केही ठाउँहरूमा - जस्तै भेनिस, CA - माइक्रो मोबाइल सवारीहरू दशकौंदेखि पैदल यात्रीहरूसँग छेउमा बसेका छन्, विगत केही वर्षहरूमा मात्र सवारहरूलाई अन्य सवारहरूका लागि सक्रिय सतर्कतामा रहन आवश्यक छ। विपरित दिशामा आउँदै गरेको राइडरको सामना गर्दा सबैभन्दा सामान्य स्कूटरिङ समस्याहरू मध्ये एक आउँछ। तपाईं कुन बाटो जानुहुन्छ? सहि ! सधैं सही जानुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले ध्यानाकर्षण गर्नुहुन्छ र नजिक आउँदै गरेको सवारसँग आँखाहरू भेट्नुहोस्, र संकेत गर्नुहोस् - चाँडै - तपाईंको आँखा वा टाउकोको झुकावले तपाईं वास्तवमै सही हुनुहुनेछ। यदि आवश्यक छ भने, सीङ वा घण्टीको साथ अर्को सवारको ध्यान खिच्नुहोस्। तपाईं दुबै एकअर्काको परिचित हुनुहुन्छ भनेर सुनिश्चित गर्नुले तपाईंलाई टक्करबाट जोगाउनेछ!
वयस्क इलेक्ट्रिक स्कूटर फोल्डिंग किक स्कूटर 84v 20000w
स्ट्यानफोर्ड माइक्रोबायोलोजिस्ट डेभिड रेल्म्यान भन्छन्, यो जाडोमा "भाइरसको एउटा सुनौलो दिन हुनेछ।" "हामी अगाडी केही राम्रा राम्रा र कठिन महिनाहरू हेर्दैछौं।" यसको कारणको एक भाग भनेको जाडो महिनाहरूमा मानिसहरूले घरभित्रै बिताउने समय हो, जसमा कम भेन्टिलेसनको साथ बन्द ठाउँहरूमा ठूला जमघटहरू समावेश छन्। "अहिले सम्म," प्रिन्सटन युनिभर्सिटीका एपिडेमोलोजिस्ट रेचेल बेकर भन्छिन्, "प्रकोपको आकारलाई असर गर्ने सबैभन्दा ठूलो कारक भनेको सामाजिक दूरी र मास्क लगाउने जस्ता नियन्त्रण उपायहरू हुनेछन्।"
यी उपायहरू बिदाहरू र 2021 सम्म जारी रहने सम्भावना छ। अनुसन्धानकर्ताहरूलाई चिसो मौसमले भाइरसको फैलावटलाई कसरी असर गर्छ भन्ने थाहा छैन, र कतिपयले यस जाडोमा २० फिटको सामाजिक दूरी सिफारिस गरिरहेका छन्। यो एक डरलाग्दो अवस्था हो, तर बाहिर निस्कन र छिटो, भरपर्दो व्यक्तिगत रूपमा यो भन्दा राम्रो समय हुन सक्छ।इलेक्ट्रिक स्कुटर K15 मोडेल वन जस्तै।
अभिनव उत्पादन वयस्क दुई पाङ्ग्रा 20000w 13 इन्च फ्याट टायर इलेक्ट्रिक स्कूटर
द k15 फ्रेमप्रविधिको उत्कृष्ट कृति हो । यो उही सफ्टवेयरद्वारा डिजाइन गरिएको हो जुन बेइजिङको प्रसिद्ध बर्ड नेस्ट स्टेडियमको मोडेल बनाउन प्रयोग गरिएको थियो, बाइकमा गतिशील प्रभाव बलहरू सिमुलेट गर्दै। यो एक विशाल 6,000 टोन प्रेस संग बनाइएको छ जसले एल्युमिनियमको आन्तरिक संरचना परिवर्तन गर्दछ जसले यसलाई तीन गुणा बलियो बनाउँछ। यसले मुख्य र उप फ्रेमहरूको कुल वजन 68kg मा घटाउन अनुमति दिन्छ! फ्रेम सख्त गुणस्तर मापदण्डहरू द्वारा निरीक्षण गरिन्छ र गतिशील रूपमा उच्च-दबाव र कतरनी प्रभावहरूको साथ परीक्षण गरिन्छ।
पछाडिको स्विङ आर्मलाई पनि सम्भव भएसम्म हल्का बनाउनको लागि समान रूपमा निर्माण गरिएको छ, जबकि अझै पनि महत्त्वपूर्ण जम्पहरू लिने काम गर्न पर्याप्त बलियो छ। फ्रेमको कठोरताले रकर हातको लम्बाइ छोटो पारेर उच्च कडा झटकाहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
फैशनेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक patinete electrico trotinette electrique
सबै भन्दा राम्रो वयस्क इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू व्यक्तिगत स्पर्शको साथ अपग्रेड गरिएको हो।
हाइबड्ज दायराका विशेषताहरूले हरेक सवारका लागि सुन्दर सन्तुलित इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध गराउँछ। शक्ति, स्वायत्तता, आराम र मूल्य बीचको इष्टतम अनुपात यहाँ हाइबाड्जमा छ; सम्भवतः हाम्रो सबैभन्दा सफल र लोकप्रिय ब्रान्ड। हाइबड्ज इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू समय र भू-भाग दुवैको परीक्षामा उभिएका छन्। ब्याट्रीलाई डेकमा सिधा निर्माण गरिएको छ र यसले एलजी-ब्रान्डेड लिथियम-आयन सेलहरू समेट्छ जुन लामो र पहाडी दुवै यात्राहरू उपयुक्त हुनेछ। haibadz ले तपाईंलाई आफ्नो haibadz इलेक्ट्रिक स्कुटरलाई साँच्चै अनुकूलित बनाउन अनुमति दिने विभिन्न प्रकारका सामानहरू पनि प्रदान गर्दछ, र हामीले k13 लाई उन्नत राइडरहरूका लागि मात्र सिफारिस गर्ने एउटा कारण हो।
नयाँ फैशनेबल2व्हील चीन इलेक्ट्रिक स्कूटर कारखाना मूल्य संग
ब्याट्री क्षमता (AH) 72v 50ah
अधिकतम गति (km/h) अधिकतम 120 km/h
दायरा अधिकतम 135 किमी
डुअल मोटर फ्याट टायर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल इलेक्ट्रिक स्कूटर 7500w*2
ब्याट्री: 72v 70AH
अधिकतम गति: 140 किमी / घन्टा (सवार वजन र भू-भाग मा निर्भर गर्दछ)
अधिकतम माइलेज: 150 किमी (सवारको वजन, भू-भाग, झुकाव र सवारीको शैलीमा निर्भर)
चार्ज समय: 8-9 घण्टा
कुल वजन: 65kg
नेट वजन: 57kg